Jan Aandolan - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: जनआन्दोनलमा हिँडेकोमा अहिले पछुतो लागेको छ
महेश आचार्य - म छक्क परेँ, म त माओवादी थिँइनँ। अरू पनि कति म जस्ता थिए होला। त्यो बिशाल मानबसागरमा सात दलका कार्यकर्ता र माओवादी मात्र पक्कै थिएनन्। पछि आन्दोलन सफल हुनुमा माओवादीले आफू मात्र श्रेय लिन खोज्यो भने दलहरूले पनि आफूले मात्र, तर निःश्वार्थ सहभागिता जनाएका जनतालाई दुवै पक्षद्वारा अबमूल्यन गरियो।
उनीहरूले आन्दोलनको योजना बनाए, तर सफल पारे जनताले। योजना मात्र सबथोक हुँदो हो त राजा ज्ञानेन्द्रका पनि आफ्नै योजना थिए। तर, उनी घुडा टेक्नु पर्‍यो। माओवादीको आफ्नै सत्ता कब्जाको योजना थियो। त्यो सबै त्यागेर सात दलसँग मिल्न आउनुपर्‍यो।
सम्झनामा वैशाख ११!
भरत बन्धु थापा, काठमाडौं, वैशाख ११ - यसैका जगमा तत्कालीन नेकपा (माआवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरी जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरिएको थियो।
देशलाई समृद्धिको मार्गमा उन्मुख गराउन संविधानसभा सम्मको यात्रा यही आन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप अघि बढे पनि अबरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
दोस्रो लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको सफलताका लागि जनताका तर्फबाट धेरै बलिदानी गरिए पनि देशमा जारी अस्थिरताले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।
हेर्नुहोस् आजकै दिन खिचिएको केही ऐतिहासिक तस्विरहरू
दरबारले जनआन्दोलन दबाउन भारतको ग्रिन सिग्नल खोजेको थियो
अमित ढकाल, काठमाडौं, वैशाख १३ - जनआन्दोलन– २ चर्कंदै गएपछि यसलाई दबाउन दरबारले सेना परिचालनका लागि भारतको ग्रिन सिग्नल खोजेको थियो । भारतले दरबारको यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । वैशाख ९ गते साँझ तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई टेलिफोन गरी दरबारको मनसाय बताएका थिए । स्रोतका अनुसार थापा र पाण्डेले लगभग एकै समयमा मुखर्जी निवासको ल्यान्डलाइन र मोबाइलमा फोन गरेका थिए ।
हामीले माधवजीलाई प्रधानमन्त्री भन्यौं, श्यामशरणले गिरिजाप्रसाद
प्यारजंग थापा, पूर्वप्रधानसेनापति - माओवादी सशस्त्र बिद्रोहलाई हतियारको बलले सखाप पार्ने नीति शाही नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि लिएन। सेनाको परमसेनाधिपति राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रबाट बरोबर एउटै चिन्ता व्यक्त हुन्थ्यो, 'माओवादी पनि बाटो बिराएका नेपाली दाजुभाई नै हुन्, निशस्त्र गरेर सुधि्रने मौका दिनुपर्छ।' हामीले राजाको त्यहिँ सदिच्छा बुझेर काम गर्नै पर्थ्यो।
बाह्रबुँदेमा भारतीय संलग्नता थियो भन्ने मैले शंकै गरिनँ
नारायणकाजी श्रेष्ठ - माओवादीले सुरुङयुद्धको रिहर्सल गरिरहेका थिए । उनीहरुको कसरी भारतसँग साँठगाँठ हुन सक्छ ? यो प्रश्नले मलाई शंका गर्ने ठाउँ दिँदैनथ्यो । ‘भारतीय सुरक्षा निकाय, खुफिया र नेपाल सरकारलाई छक्याएर सम्झौता गर्न सफल भइयो,’ म दंगदास थिएँ, ‘भूमि भारतीय भएर के भयो, काम नेपालीमात्र भएर गरिएको छ ।’ अहिले प्रचण्ड–बाबुरामले नै भारतीयको संलग्नताबारे धेरै कुरा सतहमा ल्याउनुभयो । भारतीयको समझदारीमा नै दलहरुसँग त्यो सहमति भएको थियो, उहाँहरुले पटकपटक भनिसक्नुएको छ ।
हिसिलाले प्रचण्डलाई औंल्याउँदै भनिन्, यिनीहरुले सिध्याउने भए
माधवकुमार नेपाल - राजा गलेछन्– आन्दोलनरत सात दललाई सरकार निर्माणका आह्वान गरे । एमालेले त्यो घोषणा नस्विकार्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । घन्टौंसम्म गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको पार्टीको धारणा आएन । गिरिजाबाबुलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले प्रष्ट धारणा राख्नुभएन । मैले कुरा बुझिहालेँ, ‘गिरिजाबाबु लम्पसार परिसक्नुभएको रहेछ ।’ देउवाले आन्दोलन रोक्ने पक्षमा मसँग पैरवी गरे, ‘जनता मार्ने ? मेस्याकर गर्ने ? ब्लड सेड गराउने ?’ ‘घुँडा टेक्ने ? समर्पण गर्ने ?’ म पनि कड्किएँ ।
कमल थापा - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोहोरो चाल चलिरहेका थिए । उनकै भरथेगमा सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी गरिरहेका थिए । अर्कातिर उनी राजासँग संवाद गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सिंहदरबार आउन चाहन्थे । मैले बुझेसम्म हत्याहिंसाको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको माओवादीलाई सुनपानी छर्कन राजा तयार थिएनन् ।